Maalmihii Madx Wayne Josep Maria Bartomeu Oo Soo Dhamaanaya Iyo Shaqada Oo Laga Caydhinayo. - Gool24.Net
Maalmihii Madx Wayne Josep Maria Bartomeu Oo Soo Dhamaanaya Iyo Shaqada Oo Laga Caydhinayo.
September 16, 2020 Mahamoud Batalaale
Madax waynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa qarka u saaran in laga tuuro xilka kooxdiisa ee waxaana la soo gaadhay dhamaadka mooshinkii codka kalsoonida loogu qaadayay oo meel xaasaasi ah maraya.
Horaantii bishan waxay kooxaha taageerayaasha Barcelona bilaabeen olole rasmi ah oo xilka looga tuurayo madax wayne Josep Maria Bartomeu laakiin warkii ugu danbeeyay ayaa shaaciyay in hadda uu halis wayn ugu jiro in codka kalsoonida loo qaado.
Sharciga kooxda Barcelona ayaa dhiga in haddii la helo 16,250 kun oo saxiix oo taageerayaasha ah in madax waynaha kooxda xilka looga qaadi karo waxayna hadda wararku sheegayaan in boqolkiiba 90% la dhamaystiray tirada codadkii kalsoonida loogala laabanayay Josep Maria Bartomeu.
Madax wayne Josep Maria Bartomeu oo sidoo kale lagu soo oogay dacwad in uu musuq maasuq sameeyay ayaa cadaadis badan ku soo hoos jiray sanadkii ugu danbeeyay oo ay Barcelona hadba xaalad xun la soo kulmaysay.
Laakiin jamaahiirta kooxda Barcelona ayaa banaan baxyo iyo rabshado ka sameeyay Camp Nou markii uu Josep Maria Bartomeu sabab u noqday go’aankii uu Messi ku doonayay in uu kooxda si xor ah uga baxo balse uu markii danbe ka laabtay.
Lionel Messi ayaa si aan gabasho lahayn u cadeeyay in Josep Maria Bartomeu uu isaga been u sheegay isla markaana uu kaga baxay balantii heshiiskiisa ku jirtay ee loogu ogolaaday in uu si xor ah ku bixi karayay.
Laakiin hadda Josep Maria Bartomeu ayaa qarka u saaran in gabi ahaanba laga caydhiyo shaqada madax wayne ee Barcelona kadib markii la dhamaystiray boqolkiiba 90% tirada codadka 16,250 kun oo saxiix ee xilka looga xayuubin karo.
Madax wayne Bartomeu ayaa shaqada Barcelona soo hayay tan iyo sanadkii 2014 kii markaas oo uu shaqaa iska casilay madax waynihii xabsiga ku danbeeyay ee Sandro Rosell laakiin xilkiisa ayaa dhamaanaya bisha March 2021 balse taageerayaasha Barca ayaa doonaya in ay hadda shaqada ka joojiyaan.
Dadka hogaaminaya ololaha looga soo horjeedo Bartomeu ayaa soo daabacay fariimo ay jamaahiirta Barcelona ugu sheegayaan in barri oo khamiis ahi tahay maalintii ugu danbaysay ee ay ka qayb qaadan lahaayeen dhamaystirka codka mooshinka ee Bartomeu xilka looga qaadayo.
Haddii 24 ka saacadood ee soo socda ay taageerayaasha Barcelona dhamaystiraan boqolkiiba 10% uga hadhsan saxiixyada kalsoonida loogala laaban karo Bartomeu waxa uu wajihi doonaa shaqo ka caydhin aanu xiligii doorashada gaadhi doonin.